Wakiila midowga Afrikaa ee Somaliya oo ku baaqay in loo midoobo nabad-ka-dhalinta Soomaaliya. – Radio Daljir
Wakiila midowga Afrikaa ee Somaliya oo ku baaqay in loo midoobo nabad-ka-dhalinta Soomaaliya.
Adis-abab, May 30- Madaxweynihii hore ee wadanka Ghana Flt Lt Jerry John Rawlings, oo haatan ahwakiilka sare ee midowga Africa u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ugu baaqay dhammaan dadka daneeya arrimaha Soomaalida in ay u midoobaan sidii nabad iyo xasilooni loogu soo dabaalilahaa waddanka Soomaaliya.
Mr. Jerry John Rawlings, ayaa ku sidoo kale ku booriyey dhammaan dhinacyada kala duwan ee daneeya arrimaha Soomaaliya in ay is-waafajiyaan hadallada ay sheegaan iyo ficilladooda ku aaddan Soomaaliya.
Hadalka wakiilka midowga Africa ee arrimaha Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli muranka iyo is-maandhaaf u dhaxeeyey dhinacyada Soomaalidu sii xoogaysanayo maalinba maalinta ka danbaysa. Waxana hadalka Mr. Jerry, laga dhadhansan karay walaaca uu ka qabo in la layaco guulaha la gaaray iyo fursadaha xilligaan bannaan.
Mr Jerry John Rawlings ayaa nasiib-darro ku tilmaamay kala qaybsanaanta soo kala dhex-gashay dhinacyada Soomaalida gaar ahaan dawladda federaalka taasoo uu tilmamay in ay dhuminayso taageerada beesha caalamka.